Depiote Naivo Raholdina : Te hametraka fanjakana kely anatina Fanjakana -
AccueilSongandinaDepiote Naivo Raholdina : Te hametraka fanjakana kely anatina Fanjakana
Depiote Naivo Raholdina : Te hametraka fanjakana kely anatina Fanjakana
Maro no talanjona. Nanambara tamina onjam-peo tsy miankina iray ny depiote avy amin’ny antoko Mapar, Naivo Raholdina, fa tsy misy mahazo miditra ao amin’ny biraon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany ny olona rehetra tsy manana anton’asa sy tsy manana anton-draharaha ao. “…Manomboka izao, hanara-maso akaiky ny tena fandehan-draharaha eo anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany etsy Anosy izahay. Maro loatra ireo olona tsy mpiasa ao, izany hoe avy ety ivelany, no manao ny asa maha mpanera azy… Raha mahita izany izahay manomboka izao, avy hatrany dia hiroso amin’ny fisamborana… Manomboka izao koa, tsy mahazo mivezivezy ao amin’ity sampandraharaha ity, na iza na iza, ka tsy manana anton-draharaha sy manana taratasy mazava karakaraina ao…”, hoy ny nambarany tamin’izany.
Hita amin’izany fa te hametraka fanjakana anatina Fanjakana misy sy mijoro ara-dalàna ity depioten’ny Mapar misahana ny kaomision’ny fananan-tany eny anivon’ny Antenimieram-pirenena ity. Ekena ary tsy misy izay tsy mahafantatra fa ny minisitra misahana ny fananan-tany dia avy amin’ny Mapar ihany, izay tsy iza fa ny depioten’Ambatofinandrahana, Christine Razanamahasoa. Na izany aza anefa, alalana avy aiza no ahafahan’ny depiote Naivo Raholdina mametraka didy eo anivon’ny sampandraharahan’ny fananan-tany etsy Anosy? Marihina anefa fa tsy tafiditra velively amin’ny andraikitra sahanin’ny solombavambahoaka izany. Tsy afaka mitsabaka velively amin’ny andraikitry ny olom-panjakana mpanatanteraka ihany koa izy ireo. Tsy anjaran’ireo solombavambahoaka toa an’i Naivo Raholdina no mamoaka didy sy mamoaka hitsivolana na naoty amina departemanta toa ny misahana ny fananan-tany etsy Anosy. Mazava fa ny manara-maso ny fitantanan-draharaham-panjakana eny anivon’ireo departemanta ministerialy no azon’izy ireo atao.
Ankoatra izay, tsy misy afa-tsy fizahozahoana sy ny fisehosehoana fotsiny ihany ny an’ity depioten’ny Mapar, Naivo Raholdina, ity. Porofon’izany mantsy ny fitsabahan’andraikitra ataony sy ny fitenitenenana foana amina haino aman-jery…
Efa navoaka an-gazety teto ny faha-13 Septambra 2016 ny raharaha momba ny orinasa COPS sy ny lehibeny, Lionel Lelièvre, noho ny fihetsika mampiahiahy sy ny fomba fiasan’ity orinasa misahana fiambenana iray ity. Voalazan’ny mpitandro filaminana ...Tohiny